ထက်အောင်ကျော်| February 1, 2013 | Hits:21,758
10 | | တိုက်ပွဲကြားက ကေအိုင်အေ စစ်သားများကို ဧရာဝတီ ဓာတ်ပုံဆရာက မှတ်တမ်းယူထားနိုင်ခဲ့တယ် (ဓာတ်ပုံ – Steve Tickner)
9 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website pps၁၂၃၄၅ February 1, 2013 - 8:51 pm	ကြိုက်တာရေး လို့ရတယ်။
Reply	lမောင်မြန်မာ February 5, 2013 - 4:12 pm	please, irra, ဗကပ အနီလား အဖြူလား pps1 to 5
Reply	AunG February 1, 2013 - 10:32 pm	Good Writing, All Truth, carry on…,we all Truth loved Burma People always support you…
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ February 2, 2013 - 3:18 am	စစ်ပွဲတွေမှာ သတင်းလိုက်ယူတဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်းထောက်တွေဟာ အတွေ့အကြုံရှိပြီး သတင်းဌာနရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ လိုက်ယူတာပါ။ သူတို့အတွက် ဆေးကုဘို့ ကျမ်းမာရေး အာမခံနဲ့ အသက်အာမခံကိုလဲ ပြည့်ပြည့်၀၀ ၀ယ်ယူထားပြီး ဒဏ်ရာ အနာတရ ရခဲ့ရင် အပြည့်အ၀ဆေးကုခွင့်၊ မသန်မစွမ်းဖြစ်သွားရင် ထောက်ပန့်ကြေး၊ အသက်သေဆုံးခဲ့ရင် ကျန်ရစ်သူမိသားစုအတွက်လျောကြေးခံစားခွင့်တွေ အပြည့်အ၀ ရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ပြည်တွင်းက ၀ါသနာအရ၊ ၀မ်းရေးအရ လုပ်စားနေရသူ သတင်းထောက်တွေမှာတော့ အဲသလို အတွေ့အကြုံတွေ၊ ခံစားခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်တွေ ရှိမယ် မထင်ဘူး။ စစ်မြေပြင်မှာ သတင်းယူရတာ အလွန် အန္တရာယ် ကြီးပါတယ်။ တဘက်က သတင်းထောက်မို့ တမင်ပစ်တာ မဟုတ်ပဲနဲ့၊ ဘယ်သူမှန်း ဘာမှန်းမသိ ပစ်လိုက်တာထိခိုက် နာသေကြမှာ စိုးရိမ်ပါတယ်။ သတိရှိကြစေချင်သလို ဘေးကင်းကြပါစေ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
Reply	Mr Aim February 2, 2013 - 11:39 am	စစ်တိုက်ဖူးသူတိုင်း စစ်မတိုက်လိုကြပါ။
Reply	Ven. Pandita February 2, 2013 - 2:13 pm	အစိုးရဖက်က သူတို့တပ်တွေနဲ့အတူ သတင်းယူဖို့ ဘာလို့ခွင့်မပြုတာလဲဆိုတာကတော့ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ သတင်းသမားတွေ စစ်မြေပြင်လိုက်ပြီးသတင်းယူတဲ့ကိစ္စအတွက် မီဒီယာ ဥပဒေစည်းမျဉ်းတွေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိသေးသလို အစိုးရတပ်ထဲမှာလဲ မီဒီယာနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စ၊ ပူးတွဲဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအတွက် လေ့ကျင့်ထားတာ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း (protocol) တွေထုတ်ပြန်ထားတာ ရှိပုံမရသေးဘူး။ ဒါတွေရှိလာမှ ခွင့်ပြုနိုင်မှာပေါ့။
Reply	Mr Kian February 2, 2013 - 6:55 pm	Ven.Pandita – Why KIO/KIA allowed all media because they are Open Society and pro-Democracy Peoples, especially they loved Freedom and [KIO/KIA]they fight for Peaceful and Development Country to United States of Burma Federation…
Reply	ပါကြီးဖိုး February 2, 2013 - 10:44 pm	အမှန်ကို ဝန်ခံရရင် ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအချင်းချင်း သတ်ကြတဲ့ စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ် ကချင်စစ်ပွဲသတင်းကို ဖတ်ချင်စိတ်မရှိပါ။ ဒါကြောင့် စစ်မြေပြင်သတင်းယူခွင့်ရှိမရှိကို စိတ်မဝင်စားမိပါ။ စစ်ပွဲလုံးဝရပ်စဲသွားခြင်းကိုသာ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။
Reply	ငြိမ်းချမ်းမောင် February 4, 2013 - 1:37 pm	မှန်တယ်ဗျို့ ကိုပါကြီးဖိုးရေ…စစ် ဆိုတာ နောက်နောင် လုံးဝ မရှိတော့ရင် အဲဒီ့်ကိစ္စတွေ ဘာမှ လိုတော့မှာ မဟုတ်ဘူး..ဒီတော့ စစ်ပွဲကြီးပြီးဆုံးဖို့ (လုံးဝ) အစွမ်းရှိသလောက် တတ်နိုင်တဲ့ နေရာကနေ ပါဝင်ကြတာပေါ့ဗျာ…လောလောဆယ် ဆုတောင်းတာပဲ တတ်နိုင်တတ်နိုင်ပေါ့..